“Real Madrid had iyo jeer waxay doonaysaa inay wax badan ku guuleysato” – Zinedine Zidane oo hadlay kaddib markii ay xalay reebeen Liverpool – Gool FM
“Real Madrid had iyo jeer waxay doonaysaa inay wax badan ku guuleysato” – Zinedine Zidane oo hadlay kaddib markii ay xalay reebeen Liverpool
(Liverpool) 15 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa ay u gaajaysan tahay inay wax badan ku guuleysato kaddib markii ay reebeen xalay Liverpool, isla markaana ay iska xaadiriyeen afar dhammaadka Champions League, sida uu leeyahay Macallin Zinedine Zidane.
Los Blancos ayaa lugtii labaad ee xalay lagu ciyaaray garoonka Anfield inteeda badan ku qaadatay inay shabaqeeda ka difaacato Liverpool , iyadoo Goolhaye Thibaut Courtois uu baxay isagoo shabaqiisa uu nadiif yahay oo gool ka ilaashaday.
“Waan ogeyn inaan dhibtoonayno, waxaana filaynay Liverpool inay si xooggan ku bilaabanayso 15-ka daqiiqo ee ugu horreeya.” Zidane ayaa sidaa yiri kaddib dhammaadkii ciyaarta.
“Taasi waa wax iska caadi ah, waa siddeed dhammaadka dhammaadka Champions League.
“Ugu dambeyntiinna, waan soo gudubnay waana ku farraxsannahay.
“Dhammaanteen waan midownay, kooxduna had iyo jeer way soo jeedaa, wax badan ayayna doonaysaa.
“Weli waxba kuma guuleysanin, laakiin waxaan weli ku jirnaa labo tartan.
“Wax yar ayaan nasan doonaa maxaa yeelay weli waxaan haysannaa kulammo ka hor kulanka aan la leennahay Chelsea.” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Macallinka reer France.